Hoggaamiyaha Ururka Daacish oo dhaawac culusi soo gaaray – Radio Muqdisho
in Wararka Raadiyahaa, Xulashada
Wargeyska Gardian ee ka soo baxa Britain ayaa ka soo xigtay ilo ku dhowdhow ururka Daacish in hoggaamiyaha ururka Abubakar Albaqdaadi uu gabay hoggaaminta ururka, kaddib markii uu dhaawac culusi ka soo gaaray duqeyn diyaaradaha Isbahaysigu u geysteen oo ka dhacday galbeedka dalka Ciraaq bishii March ee la soo dhaafay.
Ilo wareedyadani waxay u xaqiijiyeen wargeyska Guardian in Albaqdaadi uu qabo dhaawacyo aadu waaweyn oo khatar ku ah noloshiisa, waxayna intaas ku dareen in inkastoo uu dhowrkii maalmood oo la soo dhaafay soo hagaagayay, haddan uusan awood u lahay in uu hago howl maalmeedka ururka..
Wararku waxay sheegayaa in hoggaamiyeyaasha kale ee ururka Daacish ay leeyihiin kulammo ay uga arrinsanayaan sidii loo magacaabi lahaa hoggaamiye cusub oo ururku yeesho, ka dib markii ay ku qanceen in ay u badan tahay in Albaqdaadi uu dhaawaca u dhinto.
Diplomaasiyiin reer galbeed ah ayaa sheegay in weerarka lagu dhaawacay hoggaamiyaha Daacish uu 18-kii bishii la soo dhaafay ka dhacay meel ku dhow xadka Suuriya iyo Ciraaq ay wadaagaan.
Warbixinno hore oo soo baxay bilihii November iyo December ee la soo dhaafay ayaa tilmaamayay in Albaqdaadi uu ku geeryooday duqeymo hore.
Hoggaamiyaha ururka Daacish Abubakar Albaqdaadi, ayaa aad ugu dadaala in aan la ogaan halka uu ku sugan yahay iyo dhaqdhaqaaqiisa.
Waxa uu markii ugu horreysay ka soo muuqday masjid ku yaalla Magaalada Mousil muddo sanad laga joogo ka hor.
Ururka Daacish ee xagjirka ah, ayaa Ciraaq iyo gobollo ka tirsan Suuriya ka geysta gabood fallo aad u waaweyn oo ka dhan ah dadka rayidka ah.
Daacish waa urur xag jir ah oo magaca diinta ku xasuuqa dad aad u fara badan.
Kummaan rayid ah oo ka tirsan qowmiyadda Yaziidiyiinta ee laga tirada badan yahay ayay kooxdu afduubatay, iyadoo sheegtay inay addoonsaneyso.
Haween ka badan 3000 oo qowmiyaddaas ka tirsan ayaa wali ku jira gacanta Daacish, waxayna kooxdu kooxdu u qaybisay dagaallamayaasheeda si khasab ah ugu galmooda.
Daacish waa urur Takfiiri ah oo ka farcamay ururka Alqaacidda, waxayna caan ku yihiin fulinta xasuuq wadareedyo ka dhan ah dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan.
Dhul ballaaran oo ka tirsan Ciraaq iyo Suuriya ayay kooxdu maamushaa, halkaas oo ay dadka ku xukunto gacan bir ah iyo cabburin joogto ah.
Wasiirka dekadaha Soomaaliya: “shirkad laguma wareejin karo dekadda Berbera”
Wasiirka dekadaha Soomaaliya: "shirkad laguma wareejin karo dekadda Berbera"